Sida loo furo faylasha APK kombiyuutarka | Androidsis
Ignacio Sala | 01/07/2021 18:00 | APK, Tababarada
Ka fur faylasha APK kombiyuutarka maalmihiisu waa tiro leeyihiin. Tan iyo markii la soo saaray Google Play Store sanadkii 2008, codsiyada laga heli karo dukaanka arjiga Google had iyo jeer waxaa lagu heli karaa qaab APK ah, qaab ah laga bilaabo Ogosto 2021, waxaa loo bixin doonaa magaca AAB, markaa waa wakhti waqti, in codsiyada qaabkan aan la heli karin sida ay maanta yihiin.
Ilaa dhammaan codsiyada ay ku jiraan qaabkan, weli waxaa jira dhowr sano oo haray, qaab loogu talagalay in lagu yareeyo cabbirka codsiyada iyo in hawlgalkeeda awgiis, in la yareeyo heerka sare ee burcad badeedda taas oo dhaqan ahaan had iyo jeer lala xiriiriyo nidaamka deegaanka ee Android.
1 Waa maxay faylka APK
1.1 Faylasha APK ma yihiin kuwo aamin ah?
1.2 Maxaa rukhsad u ah APK u baahan yahay inuu shaqeeyo
2 Sida loo soo degsado APK-yada Google Play
3 Sida loo furo faylasha APK ee Windows
4 Sida loo furo faylasha APK ee ku jira Mac
5 Sida loo ordo faylasha APK ee PC / Mac
5.2 Ciyaar MEMU
Waa maxay faylka APK
APK wuxuu u taagan yahay xirmada xirmada ee Android inkasta oo sidoo kale loogu yeero Xidhmada Codsiga Android. Waa qaab faylka ay adeegsato Android si loogu qaybiyo loona rakibo barnaamijyada. APK ku jira dhammaan waxyaabaha uu codsi u baahan yahay in si sax ah loogu rakibo qalab.
APK waa a faylka isku buuqsan, Qaab ay u adeegsadaan dhammaan horumariyayaashu si loogu qaybiyo barnaamijyada dhammaan nidaamyada deegaanka. Guud ahaan, Faylasha la cadaadiyey (sida zip, rar, jar ...) ayaa loo isticmaalaa in lagu daro dhowr faylal oo mid laga dhigo, si looga dhigo kuwo la qaadi karo ama lagu cadaadiyo si loo badbaadiyo booska.
Faylasha qaab APK ah waa nooc ka mid ah JAR (Java) qaab fayl, tan iyo nidaamkan qalliinka waxaa lagu diyaariyey Java. Dhamaan APKs waa faylasha ZIP ee udub dhexaad u ah, laakiin waa inay ku jiraan macluumaad dheeri ah si ay si sax ah ugu shaqeeyaan APK ahaan.
Faylasha APK ma yihiin kuwo aamin ah?
Ilaa iyo inta aad ka soo degsaneyso faylasha APK Google Store, waad hubsan kartaa in feylasha aysan kujirin faylal xaasidnimo ah, sida waaxda dib u eegista barnaamijka Google ayaa mas'uul ka ah falanqaynta iyaga, inkasta oo mararka qaarkood ay ku dhuuman karaan codsi kale oo wata ujeedooyin xaasidnimo ah.
Haddii aan dooranno inaan ka soo dejino faylasha APK ilo kale oo aan ahayn dukaanka Google, waxaan halis ugu jirnaa in barnaamijka uu ka kooban yahay nooc ka mid ah barnaamijyada xunxun ee barnaamijka loogu talagalay ku duub waxqabadkeena taleefanka casriga ah.
Taas macnaheedu maaha in dhammaan APK-yada aan laga heli karin Play Store-ka ku jira koodh xunSi fudud looma heli karo dukaanka barnaamijka Google maxaa yeelay ma buuxinayaan dhammaan tilmaamaha looga baahan yahay shirkadda weyn ee raadinta.
Tusaale codsi oo aan laga heli karin Play Store iyo taas gebi ahaanba waa ammaan waa rakibayaasha Ciyaaraha Epic, codsi aan ku rakibi karno Fortnite aaladdayada. Google ayaa ka saartay barnaamijkan bakhaarkaaga markii ay ku jirtay albaabkiisa lacag bixinta, sidaasna looga boodayo midka ay dejisay Google.
Haddii aan wax su'aalo ah ka qabno amniga APK ee aan soo dejisannay, waxaan isticmaali karnaa shabakadda Wadarta fayraska waayo, falanqee faylka la soo dejiyey sidaasna lagu awoodo in shaki laga tago.
para ilaali isticmaalayaasha aqoonta hoose, Android dhalasho ahaan ma ogola in lagu rakibo faylasha APK ee aan ka imaanin Play Store. Si taas loo sameeyo, waa inaan horey u shaqeynaa ikhtiyaarka Asalka aan la aqoon gudaha saldhigga boosteejada. Marka ikhtiyaarkan la hawlgeliyo, waxaan awoodi doonnaa inaan rakibno wixii APK ah ee gacmaheenna soo gaara.
Maxaa rukhsad u ah APK u baahan yahay inuu shaqeeyo
Haddii ka hor intaadan rakibin codsi, aad rabto inaad ogaato rukhsadaha ay u baahan tahay inay awood u leedahay inay shaqeyso, waxaan gacanta ku haynaa dalabka APK-Info, a gebi ahaanba app bilaash ah in aan awoodno ka soo dejiso GitHub, halkaasoo lambarka dalabku sidoo kale ku yaal.
Laga soo bilaabo arjiga laftiisa, waxaan si toos ah ugu falanqeyn karnaa APK-ka illaa Virus Total, helitaanka feylka dalabka ee Dukaanka Play, ku rakib telefoonkeena casriga ah iyada oo loo marayo ADB ...
Sida loo soo degsado APK-yada Google Play
Laakiin, ugu horreyntii, waa inaan kala soo baxnaa feylka dalabka ee aan dooneyno inaan ka helno kombuyuutarkayaga. In kasta oo ay run tahay inaan gacanta ku hayno a tiro badan oo beddel ah oo loo yaqaan 'Play Store' Taas ayaa noo ogolaaneysa soo dejiso oo ku rakib APK ka casriga ah, waxaa fiican inaad had iyo jeer ka sameyso Play Store, ilaa ay tahay codsi aan laga heli karin dukaanka Google application.
Intaa waxaa sii dheer, maadaama ujeedkeenu yahay inaan feyl ka furanno kombuyuutarka, waxaa lagugula talinayaa inaad howshan ka fuliso si aadan ugu gudbin faylka daruurta, ugu dirno emayl, codsiyada farriimaha ... ka soo degso APK Google Play, waxaan isticmaaleynaa webka Downloader Downloader.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka cinwaanka websaydhka halka uu ku yaal barnaamijka Play Store ee aan rabno inaan soo dejino iyo nuqul ka url
Marka xigta, waxaan helnaa shabakadda Downloader APK iyo sanduuqa sare waxaan dhajinaa URL-ka ciyaarta ama arjiga in aan rabno inaan soo dejino oo aan riixno badhanka Abuuri Xiriirinta Soo Dejinta.
Ugu dambeyntii, tab ayaa lagu soo bandhigayaa faahfaahinta ciyaarta ama arjiga, oo ay ku jiraan cabirka feylka, nambarka nambarka iyo waqtiga ugu dambeeya ee la cusbooneysiiyay. Si aad u soo dejiso, dhagsii badhanka Halkan guji si aad u soo dejiso ...
Sida loo furo faylasha APK ee Windows
Ahaanshaha feyl isdaba-joog ah, haddii aan dooneyno inaan ku furno feyl qaab APK ah, waa inaan u isticmaalnaa Windows fayl-baaraha marin u hel dhammaan faylasha gudaha ku jira feylka qaab APK ah.
Habka ugu dhaqsaha badan ee lagu sameyn karo, waa u badal .apk kordhinta .ZIP. Sidan oo kale, nidaamku wuxuu u aqoonsan doonaa faylka inuu yahay feylasha la tuujiyey oo laba jeer gujinaya, wuxuu na tusi doonaa dhammaan waxyaabaha ku jira gudaha.
Sida loo furo faylasha APK ee ku jira Mac
Nidaamka lagu marinayo dhammaan faylasha laga helay gudaha faylka .apk ee macOS, wuxuu la mid yahay Windows-kaMaaddaama nidaamka hawlgalka Apple ee kombiyuutarku uu taageerayo qaabka .ZIP ahaan asal ahaan.
Sida loo ordo faylasha APK ee PC / Mac
Haddii waxa aan dooneyno aysan aheyn in la furo feylasha, laakiin waxa aan dooneyno ayaa ah ku rakib APK kombiyuutarkayaga, oo ay maamusho Windows ama macOS, waxa inala gudboon waa inaan isticmaalno emulatorka Android.
Haddii aan ka hadalno emulators Android, waa inaan ka hadalno ku saabsan ugu caansan dhammaantood: BlueStacks. Emulator-kan 'Android', oo loo heli karo Windows iyo macOS, wuxuu noo oggolaanayaa inaan rakibno oo aan socodsiino codsi kasta oo APK ah, iyadoo aan loo eegin asalkiisa.
para ku kaydi faylka APK 'BlueStacks'Mar alla markii aan rakibno, waa inaan labo jeer guji faylka sidaa darteed, maadaama kordhintu ay xiriir la leedahay codsigan, BlueStacks si otomaatig ah ayey u furmaysaa oo rakibidda arjiga ayaa bilaabmaysa.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in laga rakibo arjiga barta midig ee xulashada midigta. BlueStacks waxay u baahan tahay koonto Google ahMaaddaama dhammaan cayaaraha iyo codsiyada ay adeegsadaan adeegyada Google. Soo degsashada codsigan gabi ahaanba waa bilaash kumana jiraan wax nooc iibsi ah.
Emulator kale oo aad u xiiso badan oo loo yaqaan 'Android emulator' oo loogu talagalay Windows (ma laha nooc loogu talagalay macOS) waa Ciyaar MEMU, emulator ah oo na siiya ficil ahaan isla shaqooyinka aan ka heli karno BlueStacks taasina waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan rakibo wax APK ah.
Si aan ugu rakibno APK 'MEMU Play', laba jeer ayaan gujin doonnaa feylka haddii aynaan emulator kale rakibnayn. Haddii aan heysano wax kabadan hal emulator oo fidinta APK aysan laxiriirin MEMU Play, waa inaan gujino badhanka midig ee arjiga, xulo Furan oo guji MEMU Play.
Shuruudaha hawlgalka ee MEMU Play ayaa ka hooseeya kuwa ay u baahan yihiin BlueStacks, markaa haddii kombiyuutarkaagu aanu aad u awood badnayn, waa inaad tixgelisaa codsigan ku kaydi faylasha APK kombiyuutarkaaga ama Mac.
MEMU Play waxay u baahan tahay koonto Google ahMaaddaama dhammaan cayaaraha iyo codsiyada ay adeegsadaan adeegyada Google. Soo degsashada codsigan gabi ahaanba waa bilaash kumana jiraan wax nooc iibsi ah.
NoxPlayer, oo loo heli karo Windows iyo macOS, ayaa na siisa a interface aad ugu eg BlueStack, Waxay ku saleysan tahay Android 7 Nougat in kastoo nooc beta ah oo ku saleysan Android 9 horeyba loo heli karo.
para ku rakib APK ah PC-ga ama Mac-ga illaa NoxPlayer, waxaan usii wadnaa si lamid ah tii BlueStacks, adigoo labo jeer gujinaya arjiga, ilaa iyo intaanan haysan emulator kale oo Android ah oo rakibay iyo in fidintu ay laxiriiraso.
Hadday sidaas tahay, dhagsii batoonka midig ee midig ku yaal arjiga, xulo ikhtiyaarka Ku fur oo aan dooranno NoxPlayer.
NoxPlayer wuxuu u baahan yahay koonto Google ahMaaddaama dhammaan cayaaraha iyo codsiyada ay adeegsadaan adeegyada Google. Soo degsashada codsigan gabi ahaanba waa bilaash kumana jiraan wax nooc iibsi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » APK » Sida loo furo faylasha APK kombiyuutarka
Xiisaha u leh shabakadda APK Downloader, ma aanan ogeyn. Hore ayaan ugu haystay Favorites.
Had iyo jeer waan soo dejiyaa APK -yada mana ka sameeyo PlayStore -ka. Sababta ayaa ah sababta oo ah GooglePlay ama PlayStore sidoo kale 100% laguma kalsoonaan karo, waxaa jiray kiisas badan oo fayrasyo ​​ah, oo markii aad si toos ah uga soo degsato codsi, si otomaatig ah ayaa loo rakibayaa. Haddii aad soo dejiso APK ee codsi kasta (had iyo jeer waxaan ka sameeyaa kombiyuutarka) markaa waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku falanqayn karto APK oo leh Virus -ka Wadarta, kaas oo aad ka soo dejisan karto APK -ka bog kasta oo APK ah oo aan lahayn wax dhibaato ah, maxaa yeelay haddii ay jiraan ma jiro fayras Bog kasta oo la soo dejisto wuu shaqeeyaa (in kasta oo aan had iyo jeer ka sameeyo kuwa ugu caansan).
Sideen ugu wareejiyaa APK taleefanka si aan ugu rakibo?… Hagaag, aad u fudud, iyada oo loo marayo arjiga DRIVE. Kombiyuutarka ayaan ka soo geliyaa APK akoonkayga DRIVE oo hadda taleefanka ayaan ka furaa DRIVE, waxaan raadsadaa APK oo waan soo dejiyaa ka dibna waan rakibaa.